I-Evaporative Condenser, iNqaba yokupholisa, uNyango lwaManzi-iYubing
Iicooler zethu ziye zasetyenziswa ngokubanzi kwiinkalo ezahlukeneyo ukunxulumana nezixhobo ezipholileyo.
Ukugcinwa okuphantsi kunye neendleko zamandla ziziphumo zoyilo olungenangxaki.
Ngalo lonke ixesha jonga ezona ndleko ziphezulu kulo lonke ixesha lokuphila.
Sukela ulawulo lweprojekthi oluthembekileyo kunye nokuphendula ngokukhawuleza kwinkonzo yasemva kokuthengisa.
Umenzi ngobuchule System Okupholisa Tower
Ukusebenza okuphezulu kwe-Evaporative Condenser ye-Indus ...
Inkqubo ye-ICE Industrial Reverse Osmosis yeCooli ...
Ukusebenza okuphezulu kunye nokuGcina amandla
Nciphise inkqubo yamandla, ukusetyenziswa kwamanzi, ukugcinwa kunye neendleko zokufakela ngamandla okupholisa.
Ukwandisa ukusebenza kweendleko kuwo wonke umjikelo wobomi.
Xhuma kwaye udlale iziphumo zoyilo kufakelo olulula, olunoqoqosho.
Luhlala ixesha elide kwaye luthembekile
Ukungonakali, ubomi obude kunye nobunzima bokukhanya.
Iinqaba zokupholisa zihlala zibekwa kumashishini njengenye yezinto ezibalulekileyo kunye nezinye oomatshini abaninzi abanzima kwicandelo lezemveliso elihlala libandakanyeka ekwenziweni, ekuqhubekekeni nasekuhlanganisweni kweemveliso. Iinkqubo ezahlukeneyo zeshishini zenza ukuba amanzi ashushu atshizwa kwiinqaba zokupholisa. Imilomo yenqaba yokupholisa ifafaza amanzi ashushu kwi "media media" apho kukho ubuninzi bendawo kwaye oku kukhokelela kunxibelelwano lwamanzi nomoya ukupholisa amanzi. Iinqaba zokupholisa zisetyenziswa ngokubanzi kwiindawo zokucoca ioyile, izityalo zepetrokhemikhali, izityalo zamandla obushushu, izityalo zenyukliya, izityalo ezenza ukutya, izityalo zerhasi yendalo njl.
Siya kukuvuyela ukufumana imibuzo yakho kwaye sikunike inkxaso kwangoko.
NgoNovemba 11, 2020
NgoNovemba 01, 2020